Yakha isikhombisi esikwi-Intanethi seWordPress ngeGravityView | Martech Zone
Yakha isikhombisi esikwi-Intanethi seWordPress ngeGravityView
NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 Douglas Karr
Ukuba ubuyinxalenye yoluntu lwethu okwethutyana, uyazi ukuba sithanda kangakanani Iifom zeGravity yokwakha ifom kunye nokuqokelelwa kwedatha kwiWordPress. Liqonga nje eliqaqambileyo. Ndisandula ukudibanisa Gravity Forms kunye Hubspot yomthengi kwaye isebenza kakuhle.
Esona sizathu siphambili sokuba ndikhethe iFom yeGravity kukuba iyayigcina idatha ekuhlaleni. Lonke unxibelelwano lwe Gravity Forms iya kuthi emva koko idlulisele idatha kwinkqubo yomntu wesithathu. Oku kuyimfuneko kubaxhasi bam… andifuni idatha elahlekileyo ukuba umntu wesithathu we-API uyehla okanye kukho olunye uhlobo lomcimbi wokuqinisekisa. Uninzi lweefom zonxibelelwano ezilula kwimarike azenzi njalo.
Ukongeza, ngezixhobo ezinjengeReCaptcha kunye neMephu zikaGoogle ezisebenza ngaphandle kwebhokisi, yinkqubo nje eqinileyo. Ndithenge iphepha-mvume lesiza elingenamda kwiminyaka eyadlulayo kwaye bendisisebenzisa phantse sonke isisombululo esinokubakho.
Uyibonisa njani idatha yeFom yeGravity?
Iifom zeGravity sisixhobo esihle sokugcina idatha… kodwa ungathini ukuba unqwenela ukubonisa loo datha kwindawo yakho? Ndiphuhlise ezinye izixhobo zokubala ezikwi-intanethi zabaxumi abazenzileyo, kwaye ibingengomsebenzi ulula. Ndikwaphuhlise imveliso yokuhamba komsebenzi ebonisa idatha yangaphakathi kumlawuli… ibisisixhaso.
Ewe, wamkelekile Jonga iGravity! I-GravityView yiplagi yeWordPress onokuyisebenzisa ukupapasha idatha yeFom yeGrivity. Kumnandi- kwaye kufunyenwe intsikelelo yeFom yeGravity njengesisombululo esithandwayo.
Ukwakha umkhombandlela kwi-Intanethi kube lula! Yakha ifom yokufaka ulwazi, emva koko yakha iimephu kunye noluhlu lwezikhombisi ezibonisa idatha… ngaphandle kokubhala umgca omnye wekhowudi!
I-GravityView inikezela amandla okwakha izimvo ezingenamda, ukuvuma kunye nokulahla amangenelo ngaphambi kokuba baphile, kwaye kwenza ukuhlelwa kwalawo angenisiweyo ukusuka phambili. Hlanganisa iWindowsPress, iifom zeGravity, kunye neGravity View, kwaye unenkqubo efanelekileyo yokulawula umxholo onokuqokelela kwaye ubonise idatha nangona ungathanda.
Idatha inokujongwa njengoluhlu, iitafile, iitafile zedatha, okanye iimephu.
Isebenza njani iGravityView?
Yenza ifom - Okokuqala, yenza ifom nge Iifom zoMxhuzulane, ezona fom zibalaseleyo zeWordPress. Yongeza imihlaba kwifom kwaye uyimise kwiwebhusayithi yakho.
Qokelela idatha - Emva koko gcwalisa ifom. Idatha yakho iya kugcinwa kwifayile ye- isiphelo sangasemva yewebhusayithi yakho, ngaphakathi kwiplagi yeFom yeGrivity.
Yila uyilo lwakho -Yila uyilo olugqibeleleyo usebenzisa ujongano lokutsala kunye nolahle. Khetha ukuba yeyiphi imihlaba oza kuyifaka kwaye ubonise phi. Akukho khowudi ifunekayo!
Yongeza kwindawo yakho -
Okokugqibela, shumeka kwaye ubonise idatha yakho kwisiphelo esingaphambili sewebhusayithi yakho. Ungajonga okanye uhlele amangeniso ngaphandle kokuya kwimenyu yeWordPress.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndisebenzisa amakhonkco am amanyeneyo Gravity Forms kwaye Jonga iGravity kweli nqaku.
tags: umanyanisoukuqokelela idathaitheyibhile yedathaiimaphu zikagoogleIifom zomxhuzulaneimvulisohubspotulawulo onlineiimephu zamagama
Ezona zixhobo ziLungileyo zokuThengisa nge-imeyile ngeWoocommerce